Trump Kim Summit 2019 ayaa laga yaabaa inuu furo goobta dalxiis ee Kuuriyada Waqooyi ka dib booqdaha Kuuriyada Koofureed toogasho lagu dilay
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Trump Kim Summit 2019 ayaa laga yaabaa inuu furo goobta dalxiis ee Kuuriyada Waqooyi ka dib booqdaha Kuuriyada Koofureed toogasho lagu dilay
Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Kuuriyada Woqooyi Oo Jebisay Wararka • Wararka Kuuriyada Koonfureed • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Guusha shirkii Kim-Trump ee la qorsheeyay in lagu qabto dabayaaqada bishan magaalada Hanoi, Vietnam waxay furi kartaa suurtagalnimada Kuuriyada Koonfureed inay dib ugu soo laabato booqashooyinkii Buurta Geumgangsan ee Kuuriyada Waqooyi
Mount Kumgang ama Buuraha Kumgang waa buuro / buur kala duwan, oo leh 1,638-mitir-sare Birobong, Kangwon-do, North Korea. Waxay qiyaastii 50 kiiloomitir u jirtaa magaalada Kuuriyada Koonfureed ee Sokcho ee Gangwon-do iyo mid ka mid ah buuraha ugu caansan ee laga yaqaan Kuuriyada Woqooyi.
Sida laga soo xigtay Bae Kook-hwan, oo ah agaasimaha guud ee shirkadda Hyundai Asan, shirkaddiisu waxay u samaysay inay la macaamisho ganacsiyada u dhexeeya Kuuriya.
Kopok-hwan ayaa hadlayay Sabtidii ka dib booqashadii uu ku tagay Waqooyiga Kuuriya laba maalmood. Wuxuu sheegay in xarumaha Geumgangsan ay yihiin kuwo cadaalad ah laakiin maadaama ay xirnaayeen in ka badan toban sano, waxay u baahnaan lahaayeen dayactir ka hor intaan dib loo bilaabin safarada.
Barnaamijka dalxiiska ee Geumgangsan ayaa la hakiyay sanadkii 2008 kadib markii dalxiis u dhashay Kuuriyada Koofureed lagu dilay meel u dhow goobta dalxiiska.
ganacsiyada la xiray shuuciyad dhintay heshiis dhimashada toban sano xarumaha Hanoi la qabtay kiiloomitir Korea Kuuriyaan ka dib bisha buurta buuraha u baahan North Kuuriyada waqooyi ugu sarraysa suurtagal barnaamij Dayactirka miciinka resume shot site South Korea Koonfurta Kuuriya guul shirarka joojisey safar munaaradaha Trump laba maalmood Vietnam booqasho booqdaha